दर्शकलाई फिटिक्कै मन परेका थिएनन् यी बलिउड जोडी ! – Ramailo Sandesh
दर्शकलाई फिटिक्कै मन परेका थिएनन् यी बलिउड जोडी !
बलिउडमा एक सफल चलचित्र तयार हुनको लागि फिल्ममा काम गर्ने कलाकार बीचको केमिस्ट्री पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। धेरै जसी फिल्म त्यसको कथाको कारण असाफल हुने गरेको भएता पनि मुख्य स्टारहरुको बोन्डिंगले दर्शकलाई छिटै प्रभावित पार्छ। यस्तोमा, यदि दुई स्टार बीच राम्रो बन्धन छैन भने जस्तो सुकै राम्रो कथा पनि फिक्का लाग्छ। आज हामी तपाईंलाई यस्तै केहि जोडीको बारेमा बताउँछौं जुन जोडी दर्शकहरुलाई एकदमै बकवास लागेको थियो।
सलमान खान-डेजी शाह
सलमान खान बलिउडका एक ठूला सुपरस्टार हुन्। उनले थुप्रै नायिकासँग रोमान्स गरेका छन्। यद्यपि फिल्म ‘जय हो’ मा, डेजी शाह र उनको जोडी दर्शकहरुलाई फिटिक्कै मन परेन। पूरा फिल्ममा यी दुई बीच कुनै पनि केमिस्ट्री नै देखिएन। यो फिल्म बक्स अफिसमा फ्लप साबित भएको थियो।
शाहिद एक उत्कृष्ट अभिनेता हुन् र उनले विगत केहि वर्षमा यो कुरा अझ राम्रोसँग देखाएका छन्। साथै दीपिका बलिउडकी टप अभिनेत्री हुन्। यस्तो अवस्थामा, जब संजय लीला भन्सालीले फिल्म ‘पद्मावत’ मा यी दुईलाई एकसाथ कास्ट गरेका थिए, दर्शकहरूलाई लागेको थियो कि उनीहरुको जोडीले धमाल मच्चाउने छ। तर उत्कृष्ट अभिनयको बाबजुद फिल्ममा यी दुई बीच कुनै केमिस्ट्री देखिएन।
रजनी कान्त-ऐश्वर्या राय
सुपरस्टार रजनी कान्तले पनि पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या रायसँग आफ्नो केमिस्ट्रीले दर्शकलाई प्रभावित गर्न सकेनन्। रजनी कान्तलाई फिल्म ‘रोबोट’ मा ऐश्वर्या राई बच्चनको प्रेमीको रुपमा देखिएको थियो। फिल्मको कथा र उनीहरुको अभिनय दर्शकलाई मन परेको भएपनि यी दुई बीचको केमिस्ट्री भने फिक्क देखियो।
शाहिद कपूरले धेरै बलिउड अभिनेत्रीहरूसँग रोमान्स गरिसकेका छन्, तर दर्शकलाई विद्या बालनसँगको उनको रोमान्स कतै पनि मन परेन। शाहिद कपूर र विद्या बालनले फिल्म ‘किस्मत कनेक्शन’ मा एकसाथ काम गरेका थिए। यद्यपि यी स्टारले उमेरको अन्तरको प्रभाव लुकाउन भने सकेनन्।
प्रियंका चोपडा-उदय चोपडा
फिल्म ‘प्यारा इम्पोसिबल’ मा, यी दुई स्टारको बीच वास्तविक थर एउटै हुनु बाहेक अरु केही समान थिएन। फिल्ममा प्रियंका र उदयलाई देखेर दर्शकको मनमा पहिले नै यस्तो प्रश्न आइसकेको थियो कि किन उनीहरूलाई फिल्ममा सँगै कास्ट गरिएको थियो?